XOG: Musuqmaasuqa Masuuliyiinta Caafimaadka Togdheer, Xujada Wasiirka Cusub & Fashilka Mashruuca SHINE ee HPA/
XOG: Musuqmaasuqa Masuuliyiinta Caafimaadka Togdheer, Xujada Wasiirka Cusub & Fashilka Mashruuca SHINE ee HPA/DFID. Qore Ciise Yaasiin
1.Musuqmaasuq hadheeyay Mashruuca ee SHINE (DFID) ee Nafaqaynta & Daryeelka Caafimaad
2.Musuqmaasuqqa Dhakhtarka weyn ee Hargeysa & Deynta $425,000
3.Shaqaalihii Dhakhtarka weyn ee aan la shaqaalaysiin 7 sano, qaar cusubna si hoose loo qaatay.
Mashruucani wuxuu ka fulayaa labada gobol eeAwdaliyoTogdheeree Somaliland iyo labaa gobol eeBanaadiriyoGalguduudee Soomaaliya.
Gobolka Togdheer waxaa fulinayaHaayadda HPA, waxaana gobolka Togdheer ka shaqeeya in ka badan 400 oo shaqaale caafimaad ah oo isugu jira Kalkaaliso (Nurse), Umuliso (Midwife) iyo Dhakhaatiir.
1.Qabyaalad ku koobnaatay labada masuul ee ugu sareeya caafimaadka gobolka
2.Qofkasta oo hab qabyaaladeed lagu xushay waxaa lagu xidhay in uu bixiyo lacag fadhiisin lagu sheegay ama lacag baad ah oo xaaraan ah. Lacagtaasi waxay u dhaxaysay $50 ilaa $100, qofkiiba. Masuuliyiinta caafimaadka gobolka Togdheer waxay Jeebabkooda ku xeerooday lacag u dhaxaysa $20,000 ilaa$40,000(50x400=20,000).
3.Labadii bilood ee ugu horeeyay shaqada waxaa shaqaalaha laga goostay midkiiba $200. Waxaanay noqonaysaa = $200 x 400 shaqaale =$80,000sideetan kun oo doolar. Waxaana kala qaatay labada Diktoor ee Gobolka ugu sareeya.
4.Bil kasta waxaa shaqaalaha laga reebaa ama laga goostaa $100 ($100x400=$40,000) Hadda waaAFARTANkun oo doolaar ooBILKASTAtaagan.
5.Kirada laba gaadhi oo si qasab loogu shaqaaleysiiyay (Conflict of Interest) iyagoo meesha ka saaray laba gaadhi oo kale dad shicib ahi lahaayeen oo si cadaalad ah hore ugu shaqayjiray.
6.Waxaa musuqmaasuqa qayb weyn ku lehHaayadda HPA,oo u fududeysay in Masuuliyiintani Xisaabta Shaqaalaha u maamulaan la-Xisaabtan la’aan (NO Transparency and NO Supervision).
7.Haayadda HPA waxay lacagta hore ugu shubi jirtay shaqaale kasta Xisaabtiisa Bangiga uga furan (Employee Bank account) laakiin imi waxay ku wareejisay Xisaabaadka Bangiyada ay maamulaan labadan masuul.
Hadii lacagtii loogu talo galay loo leexiyo jeebab kale waxaa fashilmaya mashruucan qiimaha badan, iyolacagtii cashuur-bixiyayaasha Ingiriiska.